Iza ireo mpamorona ny logo malaza indrindra? | Famoronana an-tserasera
Inona no jeneraly miafina ao ambadiky ireo logo malaza indrindra amin'izao androntsika izao? Nanao ahoana ny tontolon'ny famoronana ireo sombin-tantara vita amin'ny marika? Androany aho te hizara aminareo ny safidin'ny sasany amin'ireo logo manan-danja indrindra sy ireo orinasa nanjakazaka tamin'ny tsena lehibe nandritra ny am-polony taona maro. Fanamboarana tsy lavorary novolavolain'ny manam-pahaizana be toa an'i Milton Glaser na i Salvador Dalí aza.
Fantatro fa maro ireo mari-pamantarana marika hamongorana azy ary horesahintsika izy ireo avy eo. Amin'izao fotoana izao dia avelako ianao miaraka amin'ny enina amin'izy ireo tsy mandany fako izy ireo.
1 Federal express
4 Tiako i New York
Nanodidina ny taona 1994 ny Federal Express dia naniraka an'i Landor Associates hamolavola ny endrik'ilay orinasa. Richard Runyan dia tompon'andraikitra tamin'ny famoronana azy tamin'ny taona 1973 ary nanomboka teo dia angano tao anatin'ny tontolon'ny famolavolana ary ohatra iray hanehoana ny fampiasana marina ny habaka ratsy. Ity sary famantarana ity dia nahazo loka famolavolana maherin'ny 40 ary voafidy ho iray amin'ireo logo valo tsara indrindra tao anatin'ny efa-polo taona lasa tao amin'ny laharana manokana faha-35 taonan'ny gazety Amerikanina Rolling Stone. Somary sarotra ny fizotry ny famoronana ary mihoatra ny roanjato no nariana mandra-pahita ilay mety indrindra. Nahita ny zana-tsipika teo anelanelan'ny E sy X. avy hatrany ny CEO CEO FedEx.
Rehefa avy nanao fivahinianana masina tany Santiago de Compostela ny fianakaviana Graham dia nanapa-kevitra ny hametraka ny tandindon'ny Shell an'i Santiago, na dia nandalo fanovana aza izy nandritra ny taona maro ary nifanaraka tamin'ny fironana famolavolana sary. Ny mpilalao sarimihetsika? Raymond Loewy, iray amin'ireo indostrialy tsara indrindra tato ho ato, manokana tamin'ny taona 1971 izay naka ireo angon-drakitra rehetra ireo mba hampivelatra ny endrika orinasa iray amin'ireo orinasam-barotra manan-danja indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Amin'ny lafiny iray dia manana ny firesahana ny Concha de Santiago ary amin'ny lafiny iray kosa ny fifandraisana matanjaka misy amin'i Espana, zavatra hita taratra amin'ny safidy mena sy mavo.
Tamin'ny 1971 ny marika naorin'i Phil Knight dia nandray ny anarana hoe Nike ho fanomezam-boninahitra ny andriamanibavin'ny fandresena. Ny logo dia novokarin'ny mpianatra mpamolavola sary iray antsoina hoe Carolyn Davidson izay nitady dinamita (ny hany fangatahana nangatahan'i Knight ho eo amin'ny sary) dia namorona sary miorina amin'ny elatry ny andriamanibavy grika. Tamin'ny voalohany dia tsy dia resy lahatra loatra tamin'ny valiny i Phil, hoy izy aza "Tsy dia tiako loatra ilay sary famantarana, fa ho zatra izany aho."
Tiako i New York
Ilay goavana Milton Glaser dia namolavola ny logo ho karazana hieroglyph izay voaforon'ny litera lehibe I, arahin'ny fo mena izay misy ny renivola N sy Y ary miaraka amina endritsoratra American Typewriter. Tamin'ny 1977 i William S. Doyle avy amin'ny Departemantan'ny Varotra ao amin'ny New York no nanakarama ny maso ivoho Wells Rich Greene mba hanao doka ho an'ny fanjakana New York. Fotoana nisehoan'i Glaser niasa tamin'ny fampielezan-kevitra ary niasa mivantana tamin'ny sariny. Ny vokany dia fahombiazana marina izay mbola mivarotra mandraka androany. Ny fahatsorany sy ny hakantony dia midika fa afaka mampifandray azy io avy hatrany amin'ny New York isika ary mihevitra azy io ho toy ny tena mora fantarina sy asimilate.
Izy io dia iray amin'ireo vatomamy malaza indrindra eto an-tany ary tsy latsa-danja noho izany ny logo azy. Raha ny marina dia iray amin'ireo reliky ny tanintsika tamin'ny taon-jato farany teo. Nanomboka tamin'ny 1959 izany rehetra izany rehefa nanangana ilay orinasa mpamokatra havoana Productor Bernat i Enric Bernat avy any Catalan ary nanana hevitra tsara taorian'ny fandinihany ny fandokoan'ny ankizy ny tanany isaky ny mihinana vatomamy izy ireo. Nanapa-kevitra ny mpamorona antsika hametraka tapa-kazo amin'ny vatomamy ary hamidy toy izao, amin'ity fomba ity dia hamadika ny vatomamy ho vokatra madio kokoa izy ary ny fahafinaretana azy nefa tsy hitelina azy. Na dia nahazo ny anaran'ny Chups fotsiny aza izy tamin'ny voalohany dia niova izany rehefa nilaza ilay dokam-barotra tamin'ny radio hoe "Chupa Chups" ary nanomboka io anarana io dia natolotry ny besinimaro azy ho an'ny besinimaro izay nanomboka niantso azy hoe Chupa Chups. Ankehitriny dia amidy eran'izao tontolo izao ny vatomamy, fa ny tena mahaliana indrindra dia ny hoe ao ambadik'io marika io dia iray amin'ireo olona goavambe eo amin'ny tontolon'ny zavakanto, Salvador Dalí malalantsika. Tany amin'ny 1969 dia nitady fanampiana tao an-tsain'ilay jeneraly Catalan ilay orinasa ary tamin'ny alàlan'ny vola iray tapitrisa no nanankinan'izy ireo ny marika. Mahavariana ny fahalalana fa ity sary famantarana ity Asa adiny iray fotsiny no ataoko amin'ilay mpanakanto ary ampiasaina ao aminy ny lokon'ny sainam-pirenena Espaniola. Nohararaotiny ihany koa ny famoronana endrika boribory izay namboarina tsara tamin'ny fonon'ny caramel ary tamin'ity fomba ity no namoronana solontena mahery vaika namboarina tamin'ny vokatra.
Ao ambadiky ny sary famantarana iray amin'ireo tambajotra fahitalavitra manan-danja indrindra ankehitriny Gerard huertakoa, mpamorona manana portfolio mahagaga ao aoriany. Ary tsy izany, fa tsy ny mpamorona sary rehetra no afaka mampihatra ny fahaizany amin'ny sehatra maro samihafa toa azy. Anisan'ireo zavatra noforoniny lehibe ny logo an'ireo orinasa toa an'i Eternity nataon'i Calvin Klein, MSG Network, sary famantarana CBS Records Masterworks, The Atlantic Monthly na PC Magazine. Tsy azontsika adino fa izy tenany ihany no namorona ny iray amin'ireo logo malaza indrindra amin'ny sehatry ny mozika: ACDC.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Iza ireo mpamorona ny logo malaza indrindra?